Psalmen 67 HTB - Nnwom 67 ASCB
1Onyankopɔn nnom yɛn na ɔnhyira yɛn
2na ɔmma wɔnhunu nʼakwan wɔ asase so,
ne ne nkwagyeɛ wɔ amanaman no nyinaa mu.
3Ma adasamma nyi wo ayɛ, Ao Onyankopɔn;
4Ma amanaman ani nnye na wɔnto ahosɛpɛ dwom,
ɛfiri sɛ wodi nnipa no so tenenee mu
5Ma adasamma nyi wo ayɛ, Ao Onyankopɔn;
6Afei asase no bɛbɔ ne nnɔbaeɛ,
na Onyankopɔn, yɛn Onyankopɔn ahyira yɛn.
7Onyankopɔn bɛhyira yɛn,
na wɔn a wɔte asase ano nyinaa bɛsuro no.
ASCB : Nnwom 67